The itsva mhando mutobvu unodzivirira mumuhara haana ruoko - China Shandong Chen lu
Action:: nemwaranzi kudzivirira
Lead nerokuti :: 0.35mmpb
HA08 unodzivirira mumuhara siketi (chiso chete pasina maoko)
Non-sleeve radiological kudzivirirwa siketi / kutungamirira suit womuenzaniso: HA08
Zvinonzi ainyanya kushandiswa kudzivirira X-ray, uye inodzidzisa anogona kusarudza kudzivirira akatevedzana zvakasiyana parameters uye nokurondedzerwa maererano kudiwa. (Kudzivirira wegamma mwaranzi Kazhinji 0.5 MMPB).
The default Ukuru kupfeka uyu unosvikirwa saizi. Kana pane dzimwe ezvinhu, mutengo zvichaita, kufadza chaizvo kubvunza-chinja!
Radioprotection siketi Anti-kutungamirira zvipfeko dzakawanda itsva unodzivirira kutungamirira pechifukidziro
Mazuva ano, vakawanda ultralight, Ultra-dzakatetepa uye Ultra-nyoro kudzivirira zvinhu munyika; Tichienzanisa kupinza vatungamirire zvipfeko zvakafanana, hama kurema 25 kusvika 30 muzana kunogona kuderedzwa.
- ranzi wokudzivirira masutu vane vakaisvonaka unodzivirira ehupfumi
Kutungamirira Kuparadzirwa zvikuru yunifomu uye chakaipa kushandiswa mutobvu hakusi attenuated. Muzvitsaurirei 0.35 / 0.5mmPb vatungamirire nerokuti; Pfeka nemishonga, nyore yakachena pamusoro zvinhu kudzivirira mari yako kufadza papi;
The itsva maumbirwo pamasikiro ranzi runodzivirira overskirt Anti-kutungamirira suit
It chakagadzirwa multi-rukoko zvokuvakisa, pamwe chete nenyanzvi dzevanhu yakarongeka design, izvo zvinoita kuti unzwe wakasununguka.
Zvakarurama pakugadzira urongwa
Nemasango basa, akangwarira, hunogara, regai iwe kushandisa vamwe nechokwadi;
Ray unodzivirira suit kuti unodzivirira rokwe
Wokugadzira ndiye yepakutanga uye zvakasiyana-siyana zvakakwana
Rich kukura, hazvinei uri mafuta dzakatetepa, varefu uye pfupi, vane yakakodzera kwamuri, hwakafanana musoni kwamuri nguva dzose; A dhazeni zvitaera, mupfumi mavara zvinogona kusarudzwa, zvakazara shambadza unhu hwako.
Previous: Chen Lu kuti mwaranzi-uchapupu repfuti ane zvakanaka chete madziro unodzivirira chaitwa
Next: Chen Lu itsva inodzivirira kutungamirira rabha chivharo inogona customized mamwe nerokuti
China Hot Sale Radiation siketi
Chinese X-Ray Protective siketi
Hospitals Use Rubber Kurusununguko siketi
Hospitals Shandisa X-Ray siketi
Import Material Protective siketi
New Protective Short siketi
New Split Protective mumuhara wawo siketi
New Type Of Protective siketi
Kudzivirirwa X-ray kutungamirira siketi
Unodzivirira Medical siketi
Unodzivirira siketi With Import Material
Unodzivirira X-Ray siketi
Radiation Lead siketi
Soft Protective siketi
Soft Split Protective siketi
Split Protective siketi With Import Material
Super Soft Protective Short siketi
Super Soft Split Protective siketi
X-Ray Lead siketi
X-Ray Protective Short siketi
X-Ray Protective siketi